स्वास्थ्य पेज » कोरोनाको कहरः एकसातामा ५६ जनाको मृत्यु, किन बढिरहेको छ मृत्यु ? कोरोनाको कहरः एकसातामा ५६ जनाको मृत्यु, किन बढिरहेको छ मृत्यु ? – स्वास्थ्य पेज
११ असार २०७८, शुक्रबार। 2021/06/25
कोरोनाको कहरः एकसातामा ५६ जनाको मृत्यु, किन बढिरहेको छ मृत्यु ?
८ भाद्र २०७७, सोमबार
काठमाडौं ८, भदौ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकसातामै ५६ जनाको मृत्यु भएको छ । कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा आइतबार राति करिब १० बजे विराटनगर–८ का ६५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै एक सातामै भाइरस संक्रमणबाट ५६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । उमेर ढल्केका र दीर्घरोगीहरु कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन् ।
लक्षण देखिएका संक्रमित बढ्दै जानु र अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर र आइसीयुहरुको अभाव हुँदा क्षतीको जोखिम झन बढेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा भाइरस संक्रमणबाट १५७ जनाको मृत्यु भइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरमा गरी १३७ जना संक्रमित आईसीयूमा छन् भने १० जनाको भेल्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
किन बढिरहेको छ मृत्यु ?
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पहिलो मृत्यु जेठ ३ गते पुष्टि भएको थियो । साउन महिनामा मृत्युदर बढ्यो । र, भदौमा मृत्युको ग्राफ अझ उकालो लागेको छ । साउन ३२ गतेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १०४ थियो । भदौ ७ गते यो संख्या बढेर १५७ पुगेको छ ।
अनलाइनकर्मीसँगको कुराकानीमा संक्रमक रोग बिशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले अहिले भइरहको मृत्यु कम्तिमा पनि तीन हप्ता अगाडि फैलिएको कोरोना संक्रमणको रिजल्ट भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समुदायमा जुन स्तरमा संक्रमण फैलिएको छ, त्यो लेभलमा टेष्ट र कन्ट्याक ट्रेसिङ हुन सकेको छैन ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार एक जनामा संक्रमितले उसको सम्पर्कमा आएको ५-७ जनालाई संक्रमण सारेको हुनसक्छ । त्यो संक्रमितलाई पत्ता लगाएर उसको सम्पर्कमा आएकाहरुको परीक्षण गर्ने, संक्रमितलाई पत्ता लगाउने र आइसोलेट गर्ने काम जति छिटो हुनसक्यो, त्यही महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ । डा. सुवेदी भन्नुहुन्छ, हामीले अझै त्यसअनुसार गर्न सकेको छैनौं ।’
पछिल्लो समय जिल्ला जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । तर यो अवधिमा समुदायमा भएको सम्भावित संक्रमितको पहिचान गर्ने काम जसरी हुनपर्ने हो, त्यो भएको छैन । भित्रभित्रै फैलिएको संक्रमणलाई समुदायमा पुग्नबाट रोक्न सकिएन भने पनि मृत्युदर अझै बढ्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् ।
८ भाद्र २०७७, सोमबार प्रकाशित
भारतमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या करिब चार लाख
बेलायतमा फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण, ४ महिना यताकै उच्च संक्रमित
भोलि अन्तराष्ट्रिय दुव्र्यसन विरुद्धको दिवसः नेपालगन्जमा आज अन्तरक्रिया
भेरी अस्पतालमा कोभिडबाट ३८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु
सर्पको बिगबिगी: यसरी जोगिन सकिन्छ !